Madagascar Matin » Moto nidona tamin’ny kamio – Niparitaka eraky ny arabe ny atidohany!
Loza mahatsiravina indray no niseho teny Ampefiloha ny alatsinainy alina lasa teo, teo ampitan’ny tranoben’ny Fiaro raha ny marimarina kokoa. Tokony ho tamin’ny sivy ora sy sasany alina teo no niseho ity loza ity. Araka ny vaovao voaray dia kodiaran-droa Scooter sy kamiao « Citerne » no nifandona ka maty tsy tra-drano tamin’izany ny nitondra ilay môtô. Raha ny nambaran’ireo nanatri-maso dia teo amin’ny fiolahana iray teo alohan’ny tobin-dasantsy Ampefiloha no nikasa hisongona ilay moto. Azo lazaina ho nandeha mafy ihany izy, ny andro anefa efa alina ary ny lalana tsy dia mazava noho ny tsy fisian’ny jiro. Tsy fantatra noho izany izay nitranga na nitsivalana na ni-« slalom » ka tafiditra tao ambany aoriana na koa nandeha mafy loatra izy anefa nijanona tampoka ity farany. Raha ny nambaran’ny nanatri-maso hatrany mantsy dia tsy hita na fantatr’ilay mpamily ity fiara be akory fa nanitsaka môtô izy. Vokatr’izay tsy fahalalany izay dia nanohy ny diany hatrany izy ary voasarikany tao aoriana ilay tovolahy. Ilay kodiaran-droa sy ilay mpamily azy anefa dia voatorotoron’ny kodiarana efatra tao aoriana ka ny lohan’ilay lehilahy dia potipotika tamin’izany. Rehefa nandeha ihany izy dia potraka teo amin’ny arabe ny fatin’ity farany izay efa simba tanteraka, indrindra fa ny faritry ny lohany ary niparitaka teo amin’ny manodidina teo ny atidohany. Ilay moto kosa mbola tafahitsoka tao aoriana. Voatery nenjehina tamin’ny fiara hafa noho izany ilay kamiao izay tsy tratra raha tsy tany Andavamamba. Rehefa nolazaina ny zava-niseho anefa ilay mpamily dia lasa nandeha nitsoaka tany 67ha, ary araka ny nambaran’ny polisy izay tonga teny an-toerana dia natahotra ny hiharan’ny fitsaram-bahoaka no nahatonga azy nitsoaka. Ireo mpitandro filaminana ireo no nisikotra ilay moto ary nentina tany amin’ny polisy tao Tsaralàlana. Raha ny vaovao azo dia mipetraka any Ambohimangakely io tovolahy io. Ny finday hita tao am-paosiny kosa no nahafahana niantso ny fianakaviany.